I-Samsung Galaxy S, indlela yokulungisa iimpazamo zeViber kwii-roms ze-ICS. | I-Androidsis
Enye yezinto uninzi lwabasebenzisi be Samsung Galaxy S, ukuphosa umva ngexesha lika Hlaziya esi sigxina kwezinye ii-roms ze-ICS ezikhoyo namhlanjeKukungabikho kokuhambelana ukufaka iViber, usetyenziso ukwenza iifowuni zasimahla kunye nemiyalezo.
Nge isifundo esilula kakhulu Kuyenzeka ukuba ndiza kukucacisela apha ngezantsi, ayizukuba yingxaki, kwaye sinokuzihlaziya nakweyiphi na iirom ICS ezikhoyo namhlanje, ukongeza ekusebenzeni ngokuchanekileyo kwesi sicelo sibalulekileyo kuninzi.
Enye yezona mpazamo zixhaphakileyo kwiirom ngokusekwe kuhlobo lwamva nje lwe-Android Isandwich yeCream Cream, kukuba isicelo Viber, okanye ayifakwanga, okanye ayisebenzi kakuhle.
Isiphoso esiqhelekileyo sihlala sisifayile se- umboko, esilelayo ukufaka ifayile isibulali yesiphelo sethu, kuba itshintshiwe kusetyenziswa indlela ye- ukupheka rom kwaye ilahlekisa usetyenziso ukuba ayifakwanga ngokufanelekileyo.
ukuba lungisa le bug kwaye senze usetyenziso lusebenze ngokupheleleyo, kufuneka sihlele kuphela ifayile ekwifolda isixokelelwano yenkqubo yefayile yangaphakathi yefowuni, ekuphela kwendlela eseleyo yokuhlela le fayile kukuba ukuba sinothando ICS oko kubandakanya ivenkile yesicelo se Samsung, Iiapps zikaSamsung, izakuyeka ukusebenza.
Ububi obuncinci, ubuncinci kwimbono yam, kuba uninzi lwezicelo luhleli Iiapps zikaSamsung sinokuzifumana ngokulula Play Store okanye nge Kwiwebhu.
1 Ukufumana ifayile yokwakha
2 Ukuhlela ifayile ye-buid
Ukufumana ifayile yokwakha
Njengoko benditshilo ngaphambili, ifayile Yakha, sinokuyifumana kwifolda inkqubo ukusuka kwiingcambu zeefayile zethu Samsung Galaxy S.
Ukufikelela kule fayile, siya kudinga usetyenziso ifayile yomhloli kunye neemvume Umsuka, umzekelo, root Explorer.
Esi sicelo sihlawulwe, kodwa ukuba sithatha ukhenketho ivenkile yosetyenziso kaGoogleNgokuqinisekileyo siya kufumana olunye usetyenziso olufanayo olusimahla, njenge Umhloli weFayile ye-ES.
Ukuhlela ifayile ye-buid
Nje ukuba ifayile ibekhona Yakha, siya kuyikopa kunye nomhloli wefayile omnye kwaye siyincamathisele kwifayile ye- Ingcambu ye-sdcard, siya kwenza oku ukuze sikwazi ukufumana ifayile kwikhompyuter yethu.
Sidibanisa Samsung Galaxy S kwikhompyuter ngentambo ye-usb kwaye uvule ifolda ye sdcard ukufumana ifayile Yakha.
Nje ukuba sisuswe siya kuyivula nangayiphi na umhleli wombhalo ukuqhubeka nokuhlela.
Njengoko ubona kwisikrini esingentla, ndikuphawule le migca mithathu kuya kufuneka siyilungiselele.
Kuya kufuneka bajonge njengale fayile:
Ngoku siza kuba kuphela gcina utshintsho kwifayile, Yibuyisele kwifayile ye- sd eyethu Samsung Galaxy S, kwaye ekugqibeleni, kwakhona kunye nengcambu ifayile yomhloli, ikope kwindlela yoqobo, engeyiyo enye ngaphandle kwefolda inkqubo ukusuka kwingcambu yefayile yangaphakathi yefowuni, enika isikhangeli imvume yokutshintsha ifayile.
Ngoku kuya kufuneka siyiqale kabusha Samsung Galaxy S, Kwaye siya kuba nakho ukufaka Viber ngendlela echanekileyo.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Samsung Galaxy S, iRom Dark Knight 5.5, IViber iza kwiNtengiso ye-Android
Khuphela - root Explorer, Umhloli weFayile ye-ES
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung Galaxy S, uyilungisa njani imiba ye-Viber yee-roms kwi-ICS
UMonserrat F Munoz sitsho
molo okwenzeka kum kodwa andiyifumani inkqubo yolawulo ayikho kwiselfowuni yam: / ndenza njani?
Phendula Monserrat F Munoz
Ungafikelela kwifolda yenkqubo, okokuqala ngokukhupha iselfowuni kunye neyesibini ngohlobo lwefayile yokuhlola uhlobo lweengcambu okanye i-ES File Explorer
Andikwazi ukusebenzisa isicelo se-twitter kwiselfowuni yam, indixelela ukuba igama lam lomsebenzisi libhalisiwe kodwa aliqali iseshoni, kwaye xa ndidibanisa ipc kunye nomsebenzisi ofanayo, andinangxaki
Molo, ingxaki yam kukuba xa ndifowunela omnye umntu akeva nto kwaye kufuneka ndidibanise ihendsfree, yintoni ingxaki ngale nto kwaye ndingayisombulula njani
Phendula u williams